Colorado Canyon: Zvimiro, Geology, Zvakawanikwa, uye Zvimwe | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 09/04/2021 16:26 | Geology
Imwe yeakanyanya kunaka masisitimu epasi pasirese ndiyo Kanado yeColorado. Iyo inoumbwa nekukurwa kwakakonzerwa kwezviuru zvemakore nekuyambuka kwerwizi rweColorado. Iyo canyon ine dombo labyrinth chimiro chinomhanya kuburikidza kuchamhembe kwedunhu reArizona muUnited States. Zvizhinji zveiyi canyon yakaziviswa National Park yekuve nehupfumi mune zvisikwa uye zvakasarudzika zvisikwa.
Naizvozvo, isu tichaisa iyi chinyorwa kukuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezvehunhu, mavambo uye geology yeColorado Canyon.
2 Zvakawanikwa nezveColorado Canyon
3 Colorado Canyon Geology
4 Mamiriro ekunze uye kushanya
Muna 1979 iyo Colorado Canyon yakaziviswa World Heritage Saiti neUNESCO. Nhasi, iri kukwikwidza kuve chimwe chezvishamiso zvepanyama zvepasirese. Izvo hazvisi chete nekuda kwekunaka kwenzvimbo dzayo, asiwo nekuda kwemikana yainopa maererano nekudzidza kwayo uye nekutsvaga. Semuenzaniso, chikonzero chekuputika kweRwizi rweColorado chinoita kuti zvive nyore kuona zvidimbu zvakati wandei zvemadhora anosvika mabhiriyoni maviri apfuura, kuburitsa pachena zvakavanzika zvese zvenhoroondo yepasi.
Uye zvakare, haingori chete iyi ruzivo rwepasi redu, asi zvakare ine hupfumi hukuru mukusiyana kwezvipenyu uye mukana wekukwezva kwevashanyi kwakasimba nekuda kwekunaka kwayo. Kana tikadzokera kumashure kweColorado Canyon tinoona kuti yakagadzirwa nerwizi rweColorado iyo nzira yayo yave ichikanganisa ivhu kwemamirioni emakore. Yakareba makiromita mazana mana nemakumi matanhatu nematanhatu uye iine mamwe makomo ari pakati pe446 kusvika 6 makiromita. Inogona kusvika pakadzika yemamita anodarika chiuru nemazana matanhatu.
Kuburikidza nemabhirioni ese emakore, nyika yedu yakasiya zviyeuchidzo zvakawanda nezvenhoroondo uye inogona kudzidzwa nekutenda kune izvi zvinyoro. Uye ndeyekuti iyo inoyerera nenzizi dzinoyerera dzakatsemura nhurikidzwa mushure mehurongwa hwevhu panguva imwechete iyo bani rakanga richikwira.
Zvakawanikwa nezveColorado Canyon
Shanduko iyi inowanikwa kunyanya mudunhu reArizona. Nekudaro, iyo ramifications yerwizi inoita kuti ive inopinda chikamu cheUtah neNevada. Mvura miviri yemusoro iyo yainayo zvikuru inopatsanurwa nemakiromita mazana maviri pakati pavo. Zvikamu zvinonyanya kushanyirwa ndiwo misoro uko vanopfuura mamirioni mashanu evashanyi vegore Ivo vanotaura nezvekukosha kwevashanyi kune iyi paki yenyika ine. Ramba uchifunga kuti vashanyi havangofamba chete nemhando dzakadai dzakanaka, asiwo kudzidza zvakawanda nezvenhoroondo yepasi redu.
Pakati pevashanyi vanoenda kuColorado Canyon pane ese marudzi ehunyanzvi. Vazhinji vavo inyanzvi dze geological dzinoenda dzoga kunodzidza kwakatangira nyika yedu. Chikamu chekuchamhembe chakada kuita 2.400 metres pamusoro pegungwa uye kuwana kwaro kuri mune imwe nzvimbo iri kwayo yoga. Inogona kusvikwa nemotokari kana nendege, nhandare iri padyo iri Las Vegas chinhambwe chemakiromita mazana mana nemakumi matanhatu nematanhatu kumadokero.
Colorado Canyon Geology
Ngatione kuti chii chikuru geology iyo ino canyon. Tinofanira kuziva kuti mazhinji ematombo anoumba iyo Colorado Canyon idombo sedimentary. Mazhinji acho anogona kuongororwa uye anodzokera kumashure kumabhiriyoni maviri emakore. Mazhinji shales ari mukati pasi pane makore makumi maviri nemazana matatu emakore kubva padombo rekare. Mazhinji emakara akawanikwa mumaitiro ecanyon akaiswa mumakungwa asina kudzika ari pedyo negungwa. Isu tinoonawo mamwe marata akaiswa mumatope emahombekombe akaumba gungwa mukufambira mberi nekudzoka kubva kumahombekombe.
Tinofanira kuziva kuti munhoroondo yese yepasi, gungwa rakawedzera uye rakaderera zvichienderana neshanduko yemamiriro ekunze yakaitika zvakasikwa. Hatifanire kuvhiringidza nekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze kuri kukonzerwa nevanhu. Kufamba kwekushandurwa kwemhuka uye zvirimwa kune shanduko yemamiriro ekunze zvaive nyore hafu yeawa. Chinhu chikuru chakasarudzika idombo reCoconino rakaiswa nenzira imwechete seya matunduru ari murenje.
Iyo yakadzika kudzika kweColorado Canyon uye kunyanya kukwirira kwetambo kwayo kunogona kuve kunofungidzirwa kune anopfuura 1.500-3.000 metres yekukwira kwebani pamusoro pemakore. Iko kusimuka kwakatanga kuitika makore makumi matanhatu nemashanu apfuura. Kukwidziridzwa uku kwese kwakagadzirwa mumatanho akasiyana pane kuve chiitiko chinoramba chichienderera, nekudaro chine matanda. Strata zvidimbu zvinoratidzwa nekuve nechero sediment. Semuyenzaniso, tinogona kuona kunyungudika kwenzvimbo dzakasiyana-siyana dzemabwe mune imwe nguva yenguva.
Iyo yekusimudzira maitiro yakawedzera iyo gradient yezvazvino yeRwizi rweColorado nematanho ayo. Neiyi nzira, aikwanisa kuwedzera kumhanya uye kugona kuenda kuburikidza nedombo zvishoma nezvishoma kugadzirisa chimiro chenzvimbo. Nzvimbo yemvura yemurwizi yakaumbwa makore zviuru makumi mana apfuura, nepo Grand Canyon ingangodaro isingasviki makore matanhatu emamirioni. Yakave nekuwanda kwekudengenyeka kwenyika mumakore maviri apfuura. Kukurwa kwevhu kuri kupfeka pasi matombo ayo ese. Mhedzisiro yekukukurwa kwevhu kwakanyanya kuomarara epasi rose.
Nhasi, nzira yerwizi inoenderera mberi nekukanganisa rukova uye kufumura matombo ekare-kare.
Mamiriro ekunze uye kushanya
Mamiriro ekunze ekunyorova kukuru akaitika panguva yechando zera. Munguva yekuita uku, huwandu hwemvura inounganidzwa nenzvimbo yemadhireni erwizi yakawedzera. Nekuda kweizvozvo, kudzika uye kumhanyisa kwegwara kwaikonzera kuwanda kwekuputika panguva dzese idzi nguva. Makore angangoita mamirioni mashanu nezviuru mazana matatu apfuura iyo yakadzika nzizi yerwizi yakachinja pakavhurika Gulf yeCalifornia uye nhanho yese yepasi yakadonha. Sezvo chikamu chepasi chakaderera, iwo mwero wekukurwa kwevhu wakawedzera. Yakasvika padanho rekukukurwa zvekuti ingangoita kudzika kweGrand Canyon nhasi kwasvika makore angangoita mamirioni 1.2 apfuura.
Nezvekushanya, chikamu chakashanyirwa zvakanyanya cheColorado Canyon chaive kumucheto kwekumaodzanyemba nemamita angangoita 2.134 makumi matatu pamusoro pegungwa. Iwe unogona kuita zviitiko senge rafting kana rwizi kudzika uye kufamba musango pakati pevamwe. Vakuru vePaki havakurudziri kutora zuva rimwe chete rekushanya, nekuti kuyedza kunodiwa uye njodzi yekuneta kubva pakupisa uye kwakanyanya tembiricha kunogona kudzikisira mamwe matambudziko.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezveColorado Canyon nehunhu hwayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Geology » Kanado yeColorado